I-china Carbide Izikhala ze-Carbide Rotary Burr Blanks abakhiqizi nabaphakeli | Xinhua
Izikhala zeCarbide zeCarbide Rotary Burr Izikhala
Sikhiqiza futhi sinikeze zonke izinhlobo zezikhala ze-carbide ze-carbide burrs rotary, wamukelekile ekuphenyweni, sizothintana kungakapheli amahora angama-24, Isingeniso kumamaki we-carbide
* Iyakwazi ukwenza imishini yensimbi (kufaka phakathi insimbi yokuqeda) nezinto ezingezona zensimbi ezifana nemabula, i-jade namathambo. Ngobulukhuni obufinyelela ku-HRC70,.
* Ukufaka esikhundleni samasondo amancane okusila e-shank ezimweni eziningi, akukho kungcoliswa kothuli okukhiqizwayo.,
* Ikhwalithi emihle yemishini nobushelelezi obuphakeme obufanele ukusebenzela imishini ehlukahlukene yesikhunta ngokunemba okuphezulu;
* Impilo ende, izikhathi eziyi-10 amathuluzi wensimbi ashesha kakhulu nezikhathi ezingama-200 isondo elincane lokugaya liqinile.
* Kulula ukuphatha nokusebenza. Iphephile futhi inokwethenjelwa, iyakwazi ukunciphisa ukuqina kwabasebenzi nokwenza ngcono isimo sokusebenza;
* Inzuzo ephezulu yezomnotho, ingaba nokuncishiswa okungu-10% kuzindleko zenqubo ehambisanayo.
Imvamisa, ijubane lokujikeleza lamathuluzi kagesi noma womoya kufanele abe ngu-6000-50000 ngomzuzu.
Ukuze isetshenziswe ngokuphepha, ama-carbide rotary burrs kufanele afakwe kahle ngesikhathi sokusebenza, ukugwema ukondla okuphindayo, ukuguqula isigayo kuyathandeka. Ukuvikela amehlo akho ngezibuko zokuzivikela nokuvimbela i-chip ukuthi iqhume ngasikhathi sinye.
1: Ukusika imiphetho ye-flash, ama-burrs nezintambo ze-welding zokusakaza, ukwakha nokufaka izingxenye ze-Welding;
2: Qeda machining izinhlobo ezahlukene isikhunta sensimbi;
3: Qeda ukusika umgijimi wamasondo ane-vane;
4: Chamfering, ukugoqa nokuhambisa iziteshi ezinhlobonhlobo zemishini;
5: Qeda machining ebusweni bore bore kwangaphakathi izingxenye imishini;
6: Umbhalo wobuciko wazo zonke izinhlobo zensimbi noma izingxenye ezingezona ezensimbi;
Izinhlobo Zokusika Imiphetho
Izinhlobo ze-Cutting Edge Izithombe Isicelo
Ukusika okukodwa uM Ikhanda lokusika elijwayelekile, ukwakheka okune-serrated kulungile, futhi ukuphela komhlaba kuhle, kufanelekile ukucubungula insimbi eqinile ngobulukhuni be-HRC40-60 degrees, ingxubevange emelana nokushisa, ingxubevange yesisekelo se-nikel, ingxubevange esekwe ku-Cobalt, insimbi engagqwali, njll.
Sika kabili X Le ndlela yokusika ephindwe kabili ine-chip emfushane nokuqedwa kobuso obuphezulu, ilungele ukucutshungulwa insimbi yensimbi, insimbi yensimbi, insimbi enobulukhuni obungaphansi kwe-HRC60, i-alloy based Nikel, i-cobalt based alloy, i-austenitic insimbi engagqwali, i-titanium alloy, njll.
I-Aluminium Sika W Isimo sokusika se-Aluminium sinesikhwama esikhulu se-chip, ukusika okubukhali kakhulu nokususwa kwe-chip okusheshayo, kufanelekile ukucubungula i-aluminium, i-aluminium alloy, insimbi elula, insimbi engeyona eyensimbi, ipulasitiki, iraba eliqinile, ukhuni nokunye
Samukela bonke osayizi abenziwe ngezifiso bezikhala ze-carbide, sicela uxhumane nathi.
Umumo no Uhlobo I-oda Cha Usayizi Uhlobo Lwamazinyo
I-Head Dia (mm) d1 Ubude bekhanda (mm) L2 I-Shank Dia (mm) d2 Ubude obuphelele (mm) L1
Isigaxa Sokuma Uhlobo M M0313X03-25 3 13 3 38 X
UM0413X03-38 4 13 3 51 X
UM0613X03-38 6 13 3 51 X
UM0618X06-45 6 18 6 63 X
UM0820X06-45 8 20 6 65 X
Ingxenye #: M1020X06-45 10 20 6 65 X
I-M1225X06-45 12 25 6 70 X
I-M1425X06-45 14 25 6 70 X
Ingxenye #: M1625X06-45 16 25 6 70 X
Langaphambilini I-Carbide Rotary Burr SM Shape -Umumo Oyisigaxa
Olandelayo: Isihlungi Sokusika Ugwayi Ama-Blades
Okungenalutho kweCarbide Burr
Carbide Izinduku ngoba Burr rotary
Izikhala zeCarbide Rotary Burr
izikhala zefayela le-carbide rotary
Umkhiqizi waseChina Carbide Rotary Burr
I-China Rotary Burrs
izinga eliphezulu le-carbide rotary burr China
Izikhala zeRotary Burr
I-Carbide Rotary Burr SK Shape -Isimo Sesigaxa nge-90 °
Carbide rotary Burr SL Umumo -Taper Umumo nge ...
Carbide rotary Burr SC Umumo -Isilinda Umumo Wi ...
Umumo weCarbide Rotary Burr SA -Umumo wesilinda
Carbide rotary Burr SF Umumo -Tree Umumo R ...
Carbide Rotary Burr SE Umumo -Oval Shape